Yemahara Pinterest Yekutengesa Nhungamiro kubva kuBrainhost | Martech Zone
Yemahara Pinterest Yekutengesa Nhungamiro kubva kuBrainhost
Chishanu, April 13, 2012 Mugovera, Kukadzi 4, 2017 Douglas Karr
Ivo vanhu vanobva kuBrainhost vakandiwisira mutsetse kusimudzira yavo nyowani gwara, Maitiro Ekusimudzira yako Webhusaiti nePinterest uye ini ndinofunga ivo vaita basa rakanaka pairi!
Heano matatu Excerpts kubva kuGwaro Raungangowana Rinobatsira:
Parizvino, Chobani yogati, Dyson vacuum cleaners, Etsy.com, uye kunyangwe inozivikanwa Nike shangu yechiratidzo ine dzakashata dzakakurumbira mapeji ePinterest. Chinoita kuti mapeji avo kana mabhodhi anyanye kufadza ndechekuti HAVASI kushandiswa semapeji ekutengesa asi vari panzvimbo kutaura kunoonekwa nezve tsika kana hupenyu hunofarirwa nevaya vanosarudza iyo mhando kana sevhisi.
Kupinha kunonyanya kukosha kana yakabatana nemabasa echokwadi ekubatanidza (Semuenzaniso, ndevaya vanosiya makomendi, "repin" uye vanotevera vamwe vanozoona kudzoka kwakawanda kubva kuPinterest chiitiko). Usave noudyire. Sezvo nezvechero chiitiko chekudyidzana, kusimudzira vamwe kunozopedzisira kwavatungamira kuti vadzosere nyasha. Kana network iri muindasitiri yako, iwe unowana dzimwe shamwari nyowani uye ramba uchivaka chiremera chako navo.
Unofanira kutanga kuvatevera uye kuita zvese zviitiko zvinobatsira account yako. Semuenzaniso, iye mubiki uyo isu tanga tichitaura nezvake mukati megwara rino anogona kutevera vagadziri vevheni, vagadziri vezvinhu zvekubheka, vamwe vavabiki, vanyori vebhuku rekubika, makambani ezvekudya, nezvimwe. Chero eaya mapiniini anogona kuwana mamwe mapini evabiki akakodzera uye nekutaura, senge, kana kuadzokorora. Izvi zvinowedzera uye zvinowedzera vateereri uye inowedzera mikana yekuwedzera traffic kune webhusaiti kana blog.
Pinterest yakave nekukura kwakanaka uye yakajeka nzvimbo. Takanyora nezve kubatanidzwa paPinterest, ndichiwedzera a Pinterest Pinit Bhatani kuWordPress uye akagovana zvimwe Pinterest huwandu hwevanhu. Isu zvakare tine yedu yakawanda peji rePinterest pane Kushambadzira Infographics.
Tags: brainhostPinterestpinterest gwarapinterest marekting gwara
Co-Yakanyorwa Mapepa muWordPress
Hurumende yeUS Kupindira Kudzokera muCISPA
May 26, 2012 pa 3: 13 AM
Ini ndashandisa pinterest kugadzirisa yangu saiti uye mhedzisiro yacho yaishamisa saiti yangu yakasvetwa kubva ku # 182 kuenda ku # 7 mu3 mavhiki nguva.
Hunyengeri ndewekuti isu webhusaiti yedu tinopinirwa uye kupinhwa nevanhu vazhinji ichi chikamu chakaomesesa. Vazhinji vashandisi vepinterest havazoite repin pavanenge vasina kufanana nezvatakanyora.
Ini ndinoita zvakapusa kuiburitsa pane fiverr uye ndikaisa saiti yangu kupinirwa nevanhu makumi manomwe neshanu, handizive kuti akazviita sei achingotsvaga nekunyora pinterest pa fiverr uye iwe uchaiwana pane iyo TOP. Vazhinji vamwe vatengesi vanopa pinterest sevhisi pane fiverr asi mune yangu ruzivo ivo havagone kuita kuti webhusaiti yangu iwedzere muSEO. Handizive kuti sei.
Zvikonzero nei Pinterest yakanaka kune SEO:
1. Google kufarira pasocial media signal kuti irege kumakwa semasangano epurazi.
2. Kamwe webhusaiti yedu payakapetwa ine 3 backlinks kuverenga.
3. Kunyangwe isingatsigire anchor zvinyorwa (kunze kweiyo url chinongedzo), ichiri yakakwana yekuisa mazwi edu akakosha murondedzero. Google ichaverenga !!
4. Unofanirwa kubatanidza zvinongedzo zvemapini ako kune iyo kuti yako webhusaiti iwedzere muSEO.